Ban Ki-moon oo sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada Amisom ka soo gaartay weerarkii Leego |
Ban Ki-moon oo sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada Amisom ka soo gaartay weerarkii Leego
clomid tablets buy, buy clomid. Xoghayaha Guud Qaramada Midoobe, Ban Ki-moon, ayaa waxa uu cambaareeyay weerarkii Jimcihii ka dhacay Deegaanka Leego ee Gobolka Shabeellaha Hoose, laguna dilay askar badan oo ka tirsan Ciidanka Burundi ee qaybta ka ah Amisom.
Xoghayaha, ayaa waxa uu sheegay inuu aad iyo aad kaga xun yahay waxyeelada Ciidanka Burundi ka soo gaartay Xoogaga Ururka Al Shabaab, isagoona weerarkaasi ku sheegay waxa uu ugu yeeray fal argagaxiso.
Xoghayaha, ayaa tacsi u diray qoysaska iyo asxaabtii ay ka baxeen tobonaan ka mid ihi Ciidanka Burundi, wuxuuna balanqaaday Qaramada Midoobe inay sii wadi doonto taageeradeeda la xiriirta Hawlgalka Midowga Afrika ee Somaliya.
Ban Ki-moon, ayaa qaba Hawgalka Midowga Afrika ee Amisom inuu muhiim u yahay dalka iyo dadka Somaliyeed, si Somaliya looga caawiyo inay dib ugu soo laabato dhabaha horumarka.
VOA, ayaa baahisay in 70 askari oo Amisom ka tirsan lagu dilay weerarka lagu galay Deegaanka Leego, halka lagu la’yahay ilaa 20 askari, oo dhammaantood ka tirsan Ciidamada Burundi.
Ciidanka Militariga Somaliya ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa waxay badbaadiyeen 13 ka mid ah Ciidanka Burundi ee qaybta ka ah Amisom, xilli ay ku firxadeen weerarkii ay Shabaabku kula wareegeen Xeradii Amisom ee Leego.
Askartan, ayaa iska tuuray qoryihii ay wateen, waxay kaloo iska dhigeen tuutihii ay wateen, iyagoona markaa afka aadiyay wadada aadda Deegaanka Yaaqbari-weyne. Yaaqbari-weyne waxay ku taallaa inta u dhaxeyso Degmada Wanlaweyn iyo Deegaanka Leego.